Sei Tichifanira Kunzwisisa Bhaibheri?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Baoule Batak (Toba) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hiri Motu Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kamba Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lamba Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Mambwe-Lungu Maya Mazatec (Huautla) Mizo Moore Myanmar Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Niuean Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese (Brazil) Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sena Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | UNOKWANISA KUNZWISISA BHAIBHERI
“Bhaibheri ibhuku rechitendero rakakurumbira chaizvo. Asi vanhu vokuChina havazivi nezvaro uye havanei naro.”—LIN, CHINA.
“Handitombonzwisisi zviri mumabhuku matsvene echitendero changu chechiHindu. Saka hapana pandingambonzwisisa Bhaibheri Dzvene.”—AMIT, INDIA.
“Ndinobvuma kuti Bhaibheri ibhuku rakanyorwa kare uye ndakanzwa kuti nderimwe remabhuku anotengwa kudarika mamwe ese. Asi handisati ndamboona kuti rakaita sei.”—YUMIKO, JAPAN.
Vanhu vakawanda munyika yose vanoremekedza Bhaibheri. Asi vanogona kunge vachiziva zvishoma, kana kuti vasina chavanoziva nezvemashoko ariinawo. Ndizvo zvakaita vanhu vakawanda vekuAsia, uye ndizvo zvimwe chetewo nevanhu vakawanda vanogara kunyika dzinowanika Bhaibheri nyore nyore.
Asi ungabvunza kuti, ‘Nei ndichifanira kunzwisisa Bhaibheri?’ Kana ukanzwisisa zvinotaurwa nebhuku iri dzvene, uchakwanisa kuita zvinhu zvinotevera:
Uchagutsikana uye uchafara
Uchagona kukunda matambudziko emhuri
Uchakwanisa kukunda kuzvidya mwoyo
Uchakwanisa kushandisa mari zvakanaka
Chimbofunga nezvaYoshiko wekuJapan. Ainetseka kuti Bhaibheri rinotaura nezvei, saka akabva afunga kumboriverenga. Zvakamubatsira sei? Anoti, “Bhaibheri rakandibatsira kuva netariro uye chinangwa muupenyu.” Anowedzera kuti, “Iye zvino ndava kuziva zvandiri kuraramira.” Amit, ambotaurwa nezvake akafunga kuongorora Bhaibheri. Anoti, “Ndakashamiswa pandakaona kuti Bhaibheri rinotova nemazano anobatsira munhu wose.”
Bhaibheri rabatsira mamiriyoni evanhu. Wadii kumboriongorora pachako, woona kuti ringakubatsira sei?
Kuti uwane mamwe mashoko anoratidza kuti Bhaibheri ringakubatsira sei, ona kabhuku kanonzi A Satisfying Life—How to Attain It, kakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Sei Tichifanira Kunzwisisa Bhaibheri?